Xukuumada Somalia oo sheegtay ineysan aqbali doonin haddii shirka London ay ka soo baxaan go’aano ka dhan ah roadmapka iyo Garowe Principles | Building Momentum
Xukuumada Somalia oo sheegtay ineysan aqbali doonin haddii shirka London ay ka soo baxaan go’aano ka dhan ah roadmapka iyo Garowe Principles
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Abdiweli Mohamed Ali ayaa Sabtigii 4ta February soo gaaray Djibouti si uu uga qeybgalo shirka Kooxda Xiriirka Caalamiga (ICG).
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa lgu wadaa inuu shir-guddoomin doono shirka IC, khudbadna ka jeedin doono furitaanka shirka oo socon doona labo maalmood 5ta iyo 6da February. Sidoo kale waxaa lagu wadaa in Madaxweynaha Djibouti Ismail Omar Gelle uu isna halkaas qudbad ka jeedin doono furitaanka shirka.
Shirkan ICG ayaa ku soo toosaya waqti xasaasi ah oo Dowladda Soomaaliyeed ay ku howlan tahay dhaqangelinta Roadmap ka iyo sidii loo soo afjari lahaa xilliga kala guurka ah oo ku eg 21ka August 2012. Sidoo kale Dowladdu waxey ku howlantahay dib-u-habeynta baarlamaanka iyo dhameystirka Dastuurka. Shirkan ayaa looga hadli doonaa arrimaah Roadmapka iyo shirka London lagu qaban doono 23 February.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa Jimcihii kula kulmay Nairobi Wasiirka Arrimaha Dibedda ee UK Willaim Hague oo ay ka wada hadleen shirka London iyo sidii labada dowladood ay isaga kaashan lahaayeen in shirku uu noqdo mid najaxa. Ra’iisul Wasaare Abdiweli ayaa u sheegay William Hague in shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayaan shirka London inuu xal u helo sidii xal loogu heli lahaa Soomaaliya, isla markaana uu shirka London u sii cayilin lahaa horumarka laga sameeyey Roadmap ka iyo Garowe Principles.
One thought on “Xukuumada Somalia oo sheegtay ineysan aqbali doonin haddii shirka London ay ka soo baxaan go’aano ka dhan ah roadmapka iyo Garowe Principles”
Baarlamaanka KMG ah iyo Roadmap-ka’ – Faallo uu daabacay Wargeyska Kasmo
Hey’adda sharci dejinta Soomaaliya, waqtigan la joogo waa Baarlamaanka KMG ah. Kuwaas oo shuruucda dejiya, doorta Madaxweynaha, xilkana ka qaada, kalsooni siiya Xukuumadda ama u diida, isla markaasna doorta afhayeenka Baarlamaanka.
Hey’adda sidaas ah, masuuliyadda saarani waa weyn tahay, mana jirto cid ka sareysa oo kontrool ku leh saxnimada go’aamada ay qaataan oo aqlabiyad ku dhaca.
Isla markaas go’aamada muhiimka ah ee Xukuumaddu qaadato iyo heshiisyada dawladda Soomaaliyeed cid kale la gasho, waxay sharci noqon karaan marka Baarlamaanku ansixiyo oo keliya.
Laakiin sida muuqata Xukuumadda KMG ah iyo weliba Ra’iisal Wasaare Cabdiweli Gaas waxaa soo wajahday arrin yaab leh. Waxaa kaloo isla arintaasi haysataa Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed. Waa arrinta ku saabsan go’aankii Baarlamaanku aqlabiyad ugu codeeyey in uu Afhayeenkii xilka ka qaado, guddoon cusubna doortay.
Markaas oo Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaarihiisuba ku tilmaameen mid baadil ah!. Waxaa yaab leh, haddii ay sugan tahay in aqlabiyadda Baarlamaanku cod ku rideen in ay Shariif Xasan xilka ka qaadaan, markaas waxaa mugdi haraynayaa sida Madaxweynaha laftiisu u sii shaqayn karayo, haddii go’aankii Baraalamaanka isaga dhalay uu baadil yahay?
Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Cabdiweli laftoodu isla duruuftaas ayey ku sugan tahay. Waayo, Prof Cabdweli Gaas isaga lafdtiisu wuxuu u degdegay in uu cambaareeyo go’aanka Shariif Xasan xilka looga qaaday!.
Xog Wargesyka Kasmo helayo waxay muujinayaan in Xildhibaanada Golaha Shacbiga ee Shariif Xasan riday, ay aqlabiyadii Baarlamaanka yihiin, kalsooni buuxdana ku qabaan in ayan dib uga noqon doonin isbeddelka ka dhacay guddoonka Baarlamaanka. Waxay hubaan oo ku kalsoon yihiin in ugu dambeys, sarreynta sharcigu guuleysan doonto.
Madaxweyne Sheekh Shariif, Prof Cabdiweli iyo Shariif Xasan waxay u muuqdaan kuwo ay ku hor-gudban tahay oraahda Soomaalida ee tiraahda: ‘Durbaan la xaday, goobtii tumi lahaa ayaa rabaa!”.
Waxaa la mid ah sidii ‘Roadmap-ka iyo Garowe Principles-kii’ loo horkeeni lahaa Aqlabiyadda Baarlamaanka oo doortay Guddoon cusub!.